दैनिक बाइबली पठन योजना नोभेम्बर १th, २०१ | को लागि प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पढ्ने योजना दैनिक बाइबल बाइबल पढाइ नवम्बर १th, २०१। को लागि
हाम्रो दैनिक बाइबल पढाइ एस्तर:: १-१०, र एस्तर:: १-१-7 को पुस्तकबाट छ। पढ्नुहोस् र धन्य हुन।
एस्तर:: १- 7-1२:
1 राजा र हामान एस्तर रानीसँग भोजमा आए।2दोस्रो दिन जब राजाले दाखरस पिउँदै थिए उनले एस्तरलाई भने, “रानी एस्तर तिमीले के बिन्ती गर्छौ? यो तिमीलाई दिइनेछ: र तिम्रो बिन्ती के छ? आधा राज्य सम्म यसको प्रदर्शन गरिनेछ। Then तब रानी एस्तरले जवाफ दिइन्, “यदि राजाले मलाई खुशी तुल्याए भने, र यदि राजालाई खुशी लाग्छ भने, मलाई मेरो बिन्ती सुन्नुहोस् र मेरा अनुरोधहरू अनुसार मलाई दिनुहोस्।3किनकि हामी बेचिएका छौं। , म र मेरा मानिसहरू, नष्ट हुन, मारिन र नाश हुनलाई। तर यदि हामी कमराहरू र नोकर्नीहरूका लागि बेचिएको भए, म मेरो जिब्रो समात्ने थिएँ, यद्यपि शत्रुले राजाको नोक्सानीको सामना गर्न सकेन। Then तब राजा अहासूरसले रानी एस्तरलाई भने, “ऊ को हो र ऊ को हो?4अनि एस्तरले भनिन्, “यो शत्रु हामानको शत्रु र शत्रु हो। अनि हामान, राजा र रानीको अगाडि डराए। And राजा क्रोधमा दाखमद्यको भोजबाट उठे र राजमहलको बगैंचामा लागे र हामानले आफ्नो प्राण रानी एस्तरलाई मागे। योआशले बुझे कि राजाले उनको विरूद्धमा दुष्ट योजनाहरू बनाएका थिए।5तब राजा महलको बगैंचाबाट बाहिर दाखरसको कोठामा फर्के। अनि हामान एस्तरको ओछ्यानमा लडे। तब राजाले भने, “ऊ मेरो घरमा रानीलाई मेरो अघि जबरजस्ती गर्नेछ? जब राजाको मुखबाट यो कुरा निस्कियो उनीहरूले हामानको अनुहार छोपिदिए।6एक जना सेनापति हरोबोन राजाको अघि उभिए र भने, “हेर्नुहोस्, हामानले मोर्दकैलाई भन्नु भएको थियो कि हामानले पचास हात अग्लो फाँसी हामानको मन्दिरमा उभिए। तब राजाले भने, “उसलाई यहाँ झुण्ड्याऊ।”7यसकारण तिनीहरूले हामानलाई फाँसीमा झुण्ड्याए जब तिनले मोर्दकैलाई तैयार पारेका थिए। तब राजाको क्रोध शान्त भयो।
एस्तर:: १- 8-1२:
1 त्यस दिन राजा अहासूरसले रानी एस्तरलाई यहूदीहरूका शत्रु हामानको घर दिए। अनि मोर्दकै राजाको समक्ष गए। किनभने एस्तरले उनलाई भनिन्।2अनि राजाले आफ्नो औंठी फुकाले जुन तिनले हामानबाट लिएका थिए, मोर्दकैलाई दिए। अनि एस्तरले मोर्दकैलाई हामानको घरको जिम्मा दिइन्। Est एस्तरले राजाको अघि फेरि कुरा गरी। उनी उनको खुट्टामा घोप्टो परेर बिन्ती गर्न लागे: “अगागीका हामानको कुकर्म र यहूदीहरूको विरुद्धमा बनाएको योजनालाई रोक्न उसले आँसुको आँसु थाम्न बिन्ती गर्यो। Then तब राजाले सुनको राजदण्ड एस्तर तर्फ फैलाए।5तब एस्तर राजाको समक्ष उभिइन् अनि भनिन्, “यदि राजालाई खुशी लाग्ने छ र मलाई खुशी लागेको छ भने म राजालाई खुशी पार्ने छु र मैले उनलाई खुशी पार्न चाहे, तब हुन्छ भने। अगागी हामान हमाततका छोरा हामानले पठाएका पत्रहरूलाई उल्टो पार्नलाई पठाईयो, जुन राजाका समस्त प्रान्तमा रहेका यहूदीहरूलाई नष्ट गर्न लेखिएको थियो: For किनकि मेरा मानिसहरुमाथि आइपर्ने डरलाग्दो अवस्थालाई म कसरी सहन सक्छु? वा मेरो आफन्तको विनाश हेर्न म कसरी सहन सक्छु? Then तब राजा अहासूरसले रानी एस्तर र यहूदी मोर्दकैलाई भने, “मैले एस्तरलाई हामानको घर दिएँ र उनीहरूलाई फाँसीमा झुण्ड्याइयो, किनकि उसले यहूदीहरूमाथि उसको हात राख्यो। 8 राजाको नाममा लेखिए जस्तै तिमी पनि यहूदीहरूलाई लेख। राजाको औठीमा यसलाई मोहर लगाऊ किनभने यो लेखोट राजाको नाउँमा लेखिएको थियो अनि राजाको औठीमा मोहर लगाइएको छ भने कोही पनि उल्टो नसक्ला।9त्यस समयमा तेस्रो महीनामा, अर्थात् शिवान महीनाको तेईसौं दिनमा राजाका शास्त्रीहरू बोलाए। यो कुरा मोर्दकैले यहूदीहरू, सेनापतिहरू, भारत देखि इथियोपिया सम्मका राज्यहरूका शासकहरू, शासकहरू र शासकहरूलाई लेखेका थिए। जम्मा एक सय सत्ताइस प्रान्तहरू यस प्रदेशमा लेखिएका थिए। अनि हरेक व्यक्तिलाई तिनीहरूका भाषा अनुसार र यहूदीलाई तिनीहरूको आफ्नै भाषा र भाषा अनुसार। १० उनले राजा अहासूरसको नाममा यो पत्र लेखे र राजाको औठीमा मोहर लगाए र उनले घोडामा सवार चिट्ठीहरू, खच्चर, ऊँट र अरू ड्रमिडरीमा सवारहरू पठाए: ११ राजाले हरेक शहरमा भएका यहूदीहरूलाई राजाले दिए। एकै ठाउँमा भेला हुन, र आफ्नो जीवनको लागि खडा हुन, विनाश गर्न, मार्न र नाश गर्नका लागि, मानिस र प्रान्तका सबै शक्तिहरू जसले उनीहरूलाई सताउँदछन्, साना-साना नारीहरू र ती सबै लुट्न। एउटा सिकारको लागि, १२ राजा अहासूरसको समस्त प्रान्तमा एक दिन, अर्थात्‌ बाह्रौं महिनाको तेह्रौं दिन, जुन अदार महिना हो। १ every प्रत्येक प्रान्तमा दिइने आज्ञाको लागि यस लेखको प्रतिलिपि सबै मानिसहरूलाई प्रकाशित गरियो र यहूदीहरू त्यस दिन उनीहरूको शत्रुहरूसित बदला लिनको लागि तयार हुनुपर्थ्यो। १ So तब खच्चर र ऊँटहरूमाथि चढ्ने चौकीहरू बाहिर निस्के र राजाको हुकुममा हतार गरे र त्यसलाई दबाए। र हुकुम शूशन दरबारमा दिइयो। 15 तब मोर्दकै राजाको उपस्थितिबाट निलो र सेतो वस्त्र पहिरिएर आए अनि सुनको ठूलो शिरपेच, सुती कपडा र बैजनीको लुगा लगाई दिए। शूशन शहर अत्यन्त आनन्दित भए। १ The यहूदीहरूसित ज्योति, आनन्द, आनन्द र आदर थियो। १ every अनि हरेक प्रान्त र हरेक सहरमा, जहाँ राजाको आदेश र आदेश आए, यहूदीहरूले खुशीयाली, रमाइलो, भोज र एक राम्रो दिन थियो।
अघिल्लो लेखमादैनिक बाइबल बाइबल पढाइ नवम्बर १th, २०१। को लागि
अर्को लेखमादैनिक बाइबल बाइबल पढाइ नवम्बर १th, २०१। को लागि